Moments Neshamwari 53
Ihwo hupi hukama pakati pemagnetism uye kukuvadza, uye zvakasiyana sei, kana zvachose? Uye ndeipi ukama pakati pemagnetism nemhuka magnetism, uye zvinopesana sei, kana zvachose?
Yakanaka sayenzi haitauri kuti chii chinokwevera, uye inobvuma iyo isingazive. Izvo chokwadi, zvisinei, izvo zvinoonekwa nemasayendisiti, uye izvo zvinonzi dhiraivhi, zvinonzi zvakapfupikiswa, kuti pane chinodhonza icho muviri wese une pane imwe muviri wese maererano nehukuru hwayo, uye kuti simba rekudhonza rakadzikira kuwedzera kweiyo nzvimbo pakati pemitumbi uye inowedzerwa nevepedyo yavo. Kutevedzana kwezvechokwadi, kunodaidzwa kuti kukwevera, kunozviratidza pasina runyararo kurongeka kwezvinhu zviri mumiviri. Mashese epanyama, saka, anonzi anonamira kune mumwe nemumwe.
Magnetism isimba risinganzwisisike maererano nechimiro icho sainzi parizvino yakapa ruzivo rudiki, kunyangwe zvimwe zvezvokwadi zvakaunzwa nemagineti inozivikanwa kwazvo kumasainzi. Magnetism isimba rinozviratidza kuburikidza nemagineti. Magineti ndiwo muviri mune zvese kana zvimwe zvinhu zvakaita senge polarity, uye pane maburi pakati pematanda mune zvidimbu anenge akafanana. Iwo matanda akanaka ezviumbwa aine anenge akaenzana mademo anonongedza kune rumwe rutivi, matanda akashata ezviumbwa izvi anonongedza kune rimwe divi. Muviri imagineti, zvinoenderana nekumberi kwekutanga kwezvinhu izvo zvakaenzana kana demo rakafanana nedemo. Magineti inosvikira kukwana seginiti, zvichienderana nehuwandu hwayo hwayo hwakaita senge maburi uye hwakafanana, zvichienzaniswa nehuwandu hwezvikamu izvo zvisingaenzane nedemo uye zvisiri zvakafanana polarity. Magnetism inoratidzira kuburikidza nemuviri zvinoenderana nechikamu cheaizi mukati mehukuru hwemuviri ayo ari magineti, ndiko kuti, kwakaita senge polarity nemademo zvakafanana. Magnetism isimba riripo pese pese mupasi, asi ichiratidzira chete kuburikidza nemiviri ine masimba emagineti echikamu chavo. Izvi zvinoshanda kune zvisingaoneki zvinhu.
Simba rimwe chetero rinomutswa kune rakakwirira simba mumiviri yemhuka. Magineti yemagineti ndiko kushanda kwesimba kuburikidza nemiviri yemhuka, apo miviri yacho iri mune chimwe chimiro. Chimiro chinofanirwa kuve chemagineti chinofanira kunge chakadaro zvekuti masenduru ari mumasero nemasero emuviri wemhuka zviri zvechimiro kuitira kuti simba remagineti rose riyerere mukati mavo. Kuti izvozvo zviitike chimiro chinofanirwa kunge chakafanana neuyo mune zvisingaoneki magneti. Hembe yemuviri wemhuka ndiyo musana, uye miviri yemhuka imagineti kana iwo masisitimu ari mumaseru agadziridzwa mukuenderana nenzvimbo inoenderana yemuzongoza uye mumongo mumabhonzo. Kuita kubva kumatanda emuviri kuri kuita nerve. Iyo yekugezera yemagineti kana munda ndiyo nharaunda yakatenderedza muviri. Chero miviri yemhuka inouya mukati mekurudziro yeuyu munda, inonzwa mhedzisiro yesimba remagineti simba rinoyerera nemuviri wemagineti muviri uye rinobva ranzi mhuka yemagineti.
Magineti yemhuka haisi yemagineti yemagineti, kunyangwe iine chikamu mukugadzira icho chinonzi munhu zvemagineti. Magineti yemhuka haisi hypnotism, asi vanhu vane mhuka yemagineti vanogona kuishandisa kuburitsa hypnotic mhedzisiro.
Iyo linga sharira, kana kuti isingaoneki chimiro chemuviri wenyama, ibheji rekuchengetedza yehupenyu. Imwe yemamood inoshanda mukati mehupenyu ndeyemagineti. Kana iyo linga sharira iri mumuviri wemunhu iine zvidhanana zvakavakirwa sezvakataurwa, ndiko kuti, izvo zvimisikidzwa zvakabatana, zvino inogona kubata nekuchengeta hupenyu uye inogona kuendesa hupenyu pasi pechinhu icho chinonzi mhuka yemagineti.
Mhinduro kumubvunzo ndeyekuti hapana hukama hwakananga pakati pekukweva nemagineti yemhuka sezvakatsanangurwa. Ivo vanosiyana mune izvo, kusvika pakukwezva, huwandu hwese hunodhonza humwe humwe simba, uye simba rodaidzwa kuti segiravhiti rinoshanda nguva dzese; asi simba rinodaidzwa semagineti yemhuka haritambe panguva dzese, asi rinoshanda mune idzo zviitiko chete kana paine chimiro chemhuka, chimiro chazvo chakafanana nekuparadzanisa kwezvinhu uye kufanana kana kufananidzira madhimoni.
Mishonga inokonzerwa sei nemagnetism yemhuka?
Simba remagineti isimba repasirese rinoshanda kuburikidza nemuviri wemunhu, mune iro maseru akaganhurwa uye akarongedzwa neimwe nzira, iyo polarization uye kurongeka kunopinza hupenyu hwepanyama mumuviri uye kubvumira kuendeswa kwehupenyu zvakananga kune imwe mhuka yemuviri.
Muviri unorwara muviri ndeuyo unoshaya gadziriro chaiyo yezvikamu zvawo, kana kuti mune imwe mune zvipinganidzo pakuyerera kwehupenyu, kana mune izvo shanduko dzakaitika nekuda kwekusavapo kwemazuva ese kufema uye kutenderera kwehupenyu. Mumwe ane yakawanda mhuka zvemagineti, uye uyo kuburikidza naye mhuka yemagineti inotapurwa nyore, anogona kuporesa zvirwere mune vamwe. Anogona kupora nekuvapo kwake ega asina kusangana nemuviri, kana anogona kupora nekuonana nemutumbi kuti aporeswe. Kana iko kurapa kunoitwa nekuvapo kweiye anoporesa kunoitwa nekuvhara kwevanorwara mumhepo yakapoteredza unopora. Mhepo inove mhepo yekushambira yemagineti, yakapihwa hupenyu hwese hwekuita kunge mhuka yemagineti. Magineti yemhuka izita rakashata rehukuru hwesimba guru rehupenyu hwese, asi isu tinorishandisa pano kuti tirambe tiri mukati mekujairika kwekushandisa nguva yacho. Bhati rinoita pamhepo yemunhu anorwara uye rinoda kudzoreredza mukati maro kutenderera kwesimba rehupenyu hwese, nekubvisa zvimisikidzwa, kutangazve kutenderera, uye nekugadzirisa zvekare mamorekuru mumasero, kuti simba rehupenyu riite kuyerera pasina zvimiro uye nhengo dzomuviri dzinobvumidzwa kuita mabasa adzo.
Kuporesa kuburikidza nemagineti yemagineti, kana yaitwa nekubatana zvakananga kwemuviri weuyo wekuporesa, zvakanyatsoitwa kana maoko eanoporesa, achibata seyakanaka uye matanda asina kunaka, akaiswa pamutumbi kana chikamu chakakanganiswa. Simba remagineti rinogona kubva kune chero chikamu chemuviri, senge maziso, mazamu, asi nzira dzechisikigo dzekuishandisa ndeyemaoko. Chinhu chakakosha pakurapa kurapa ndechekuti pfungwa dzemurapi hadzifanirwe kukanganisa kutapurirana kwemagineti. Kazhinji pfungwa dzinobata uye dzinokanganisa simba rekuporesa, nekuti murapi kazhinji anotenda kuti anofanira kutungamidza kuyerera kwemagineti nepfungwa dzake. Panguva dzose, apo muporesi anoita nepfungwa dzake zvine chekuita nemagineti, iye achiedza kupora, angakuvara, nekuti pfungwa hadziite kupora, kunyange zvichiratidzira uye kupenda kwemagineti. Pfungwa dzinokanganisana uye dzinovhiringidza zviitiko zvepanyama zvemagineti. Iyo magnetism ichaita zvakasikwa kana isina kukanganiswa nepfungwa. Zvisikwa, uye kwete pfungwa, zvinokanganisa kurapa. Pfungwa dzemunhu hauzive zvakasikwa, uye haizvizive pachayo kana ari mumuviri. Dai yaizviziva iri mumuviri saka pfungwa dzaisazokanganisa nehunhu.